Waxaa loo baahan yahay dadka si ay u fahmaan waxa ay ku biiro smart yahay iyo sida ay u hawlgasho. Waa category oo dhan iyo dhan ah hawlaha iyo waxay ka caawisaa ma samayn wax la yaab leh. Halkan waa
Waa maxay biiro smart?
Waxaa waajib ah buuxda si ay u fahmaan iyo in la ogaado faahfaahinta biiro smart loogu talagalay dadka doonaya in ay si wanaagsan iyo si siman ganacsiga. Jawaabtu waa in ay caawisaa mid ka mid ah ayaa qalab jir dhaqaaqo xogta in qalab cusub Galaxy iyo in sidoo kale aad si fudud oo dhaqso. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira labo nooc oo Switch Smart in terfiyuu version PC (Switch Smart) iyo sidoo kale version qalab kale (Switch Mobile Smart).
Waa maxay mobile smart ku biiro?
Tani waa la xiriira dheeraad ah oo ku dumiyey qalcadihii dadka isticmaala mobile. Waa codsi fudud iyo iyaga oo wax iska content waa ay halka u isticmaalnaa. Switch Smart s wax siin ku siinayaa xor u yahay inuu u dhaqaaqo xiriirada aad xitaa music iyo sidoo kale sawiro, jadwalka taariikhda, fariimaha qoraalka ah iyo sidoo kale goobaha qalab iyo ka badan si aad qalab Galaxy cusub.
Plus, Switch Smart waa duco kaa caawinaya in aad ka heli barnaamijyadooda aad jeceshahay ama xitaa soo jeedin kuwa qaar la midka ah ee Google Play. Switch Smart kaa caawin doona inaad isha marisid iyo xitaa wareejiyo content ku kaydsan qalabka iyo sidoo kale ka card SD ah.
Waxaa jiri doona qalabka ay taageerayaan aad u wanaagsan u Samsung ayaa sidoo kale. Waxay ka mid ah magacyada kuwaas oo: -
Apple: versions macruufka 4.2.1 ama wax ka sareeya. Blackberry®:
Blackberry version OS 6.0 ama wax ka sareeya.
LG, Android version 2.3, Gingerbread.
Nokia: Taxanaha 40 ama wax ka sareeya, Symbian 6.0 ama wax ka sareeya.
Samsung: Data taageeray isticmaalaya Kies version 2.5.2 ama wax ka sareeya.
Sida loo isticmaalo biiro smart
Waxaa loo baahan yahay in aad ka hesho fikrad ah sida saxda ah mid ka mid ah waa in ay isticmaalaan biiro smart. Ma aha in ay adag tahay in la fahmo shaqada farsamadaa waxa ay waxtar leh.
Waxaa lagama maarmaan ah in mid ka mid ah ayaa dib-up of iCloud hore si ay wax lagu kala soocaa. Markaas xiriiriyaan phone in computer ah. Haddii ay iPhone ah aad dib kartaa adigoo isticmaalaya Lugood. Waxaad heli doontaa suuqa kala yaqaan download biiro Smart, ka dibna waxa ay qaadan. Read http://www.samsung.com/us/smart-switch/ dheeraad ah.
Ka Badeli kara ee ku biiray smart
Technology ayaa la siiyaa dadka isticmaala la beddeli karo iyo sidoo kale. Saasaana ha ka cabsan in wax cusub isku dayaya ay weheliyaan biiro smart. Ayaa fursad kale oo jira kala yihiin: -
1) Magaca: -_ 1_683_1_
3) feature muhiim ah: Waxaa lagu taageeri karo labada Mac iyo daaqadaha. Waxaa si fudud loo heli karo oo ma keeno dhibaatooyin badan. Waxaa dib u samayn kartaa ilaa iyo xataa dambe ku kaydiso. Waxay ka caawisaa si ay u dhawrto xogta phone muhiim xaqiijistay. Waxay ka caawisaa si ay u soo ceshano xogta phone dib iyo xitaa qalabka si Lugood wareejiyo qalab kale oo wax. Waxaa xitaa caawiyo dib u soo ceshano xogta laga helay ilo kale.
4) Sida loo isticmaalo
Ma aha in ay adag tahay in la isticmaalo waxan. Waxay u eg tahay qaybsiga meel kale oo caadi ah halkaas oo aad leedahay in la sameeyo oo dhan waa la isku xiro iyo la wadaagin. Waa wax feature sahlan. Just aad maskaxda ku hayso saddex tallaabo: -
a) Isku aad qalab u la xidhiidha net loo baahan yahay. Ma shaqeyn doonaan haddii aan xiriir la internet xaqiijisatay la helo qalabka aad isticmaalayso. Sidaas si aad u hesho shaqadii la soo qabtay flash ah, waxaad u baahan tahay in ay soo jeedin ku saabsan xiriir internet-ka marka hore.
b) Marka gagadin, ee Switch Samsung Smart si toos ah u siiya ikhtiyaar si ay u gudbiyaan files. Waayo, waxay ku siin doonaa fursadaha in ay doortaan baxay faylasha aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan.
c) Ka dib markii liiska laga furay, ka Switch Samsung Smart si toos ah u ogolaan doonaa in aad dooratid liiska faylasha si ay u gudbiyaan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya dooro files kuwa.
d) Waxaa ku soo xigay, kaliya guji samaysay / iibsiga si ay u tagaan dheeraad ah oo ku saabsan habka ee ah isticmaalka Samsung Smart Switch.
e) Ma kala iibsiga si uu u dhameystiro isticmaalaya Switch Samsung Smart.
Biiro Smart aan shaqaynayn? Sida loo sameeyo?
Samsung Smart Switch mararka qaarkood laga yaabaa in ay dhibaatooyin sida ay u diidi kartaa in ay ka shaqeeyaan. Qaar ka mid ah kuwa ugu badan waa ku koobay sida hoos ku qoran:
• Waxaa jiri kara arrimo waafaqsan telefoonka oo aan ilaa xad isku sheegashada.
• app ayaa mararka qaarkood laga yaabaa inay qaadato hakisey hawshii ee geedi socodka la farriimaha kala duwan baadi.
• app ayaa xiranto markii qaar ka mid ah
• Waxaa laga yaabaa khaladaad Content wareejinta la files zip oo ay ku jiraan macluumaadka ku dhicin.
Faraqa u dhexeeya biiro Smart oo Kies
Samsung Smart Switch waa mid ka mid app adag kuu oggolaanaysa in aad muuqan wareejiyo xiriirada, photos, music, videos, fariimaha, qoraalo, jadwalka iyo ka badan si aad qalab Samsung Galaxy. Samsung Kies ayaa dhanka kale kuu ogolaanaysaa inaad ku xidhi telefoonka gacanta si aad PC, sidaas taas oo kuu sahlaysa inaad waafajinta xogta u dhexeeya qalabka iyo sidoo kale ka heli barnaamijyadooda cusub.
Kooxda kale oo nidaamsan of this app Samsung waa Side nidaameed in mid ka mid kuu ogolaaneysaa in aad si aad u koontaroosho aad telefoonka ka PC bixinta aad u furid shaashadda ku saabsan telefoonka. Dhinaca kale, Kies 3.0 sidoo kale ha doonaa mid dukaanka System hadda Operating oo ay ku jiraan waxyaabo kale oo kuu oggolaanaysa in aad oggolaanayaan in aad PC.
Wixii Software Faallada Isticmaal
Biiro Smart waa fursad smart loogu talo galay dadka. Waa degdeg ah, smart oo aan clunky. Wixii xog kala iibsiga u dhexeeya laba Samsung telefoonada smart, gurmad xogta, dib u soo celinta, .Wadashaqayntaas, iyo wararka software haatan waxaa tababare hal meel. Kies waxaa si kastaba ha ahaatee, laguma talinayo inay sawiro taageerto kor. Sidoo kale waa clunky iyo maamulka file ma yahay mid casriyeeysan.
Marka dadku waa in ay isticmaalaan Samsung biiro smart?
Samsung ku biiro smart waxaa kaliya oo aan loo isticmaalo samaynta baxay kala iibsiga ah file. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa inuu u dhaqaaqo ama wadaagaan videos, music iyo xijiyaan kale. Waxaa sidoo kale la kulmay la .Wadashaqayntaas automatic. Sidaas waa mid u isticmaalaan mar kasta oo loo baahan yahay iyo sidoo kale meel kasta oo loo baahdo.
Marka dadku waa in ay isticmaalaan Kies Samsung?
Samsung Kies waa app a featured isku xira qalabka lagu wadaago oo kaliya. Laakiin marna ma hayaan sawiro muhiim ah. Sidaas darteed haddii aad kaliya raadinaya files wareejinta, waxaad isticmaali kartaa Samsung Kies.
> Resource > Android > 6 Waxyaabaha ay tahay in aad Ogaato ku saabsan Switch Smart